Al shabaab oo labo qof oo Keenyaati ahaa duleedka Gaarisa ku dilay - Halbeeg News
Al shabaab oo labo qof oo Keenyaati ahaa duleedka Gaarisa ku dilay
GAARISA (HALBEEG) – Mileeshiyaad la tuhunsan yahay in ay ka tirsan yihiin Ururka Al shabaab, ayaa shalay oo Jimce ahayd toogasho ku dilay labo qof oo Kenyan ahaa, kadib markii ay jidka u galeen bas dad rakaab ahi la socdeen oo marayay duleedka degmada Gaarisa.
Dad goobjoogeyaal ahaa ayaa warbaahinta Kenya u sheegay in tobannaan dagaalyahan oo ku hubaysan qoryaha darandoorriga u dhaca ee AK-47, ay jidgooyo u dhigteen mid kamid ah basaska shirkadda safarrada ee Kilaas, kaas oo ku safrayay inta u dhexaysa deegaannada Ijara and Sangailu .
Mileeshiyaadka oo dhammaantood ku hadlayey afka Sawaaxiliga, ayaa ku amray dadka gaariga saarnaa in ay soo degtaan iyagoo dabadeed kala soocay kuwa haysta diinta Islaamka iyo kuwa haysta diimaha kale.
Qof kamid ah dadkii baska la socdey oo ka gaabsaday in magaciisa la baahiyo ayaa sheegay, in saddex qof oo christian ahaa gaar loola baxay laguna amray inay ashahaadtaan amase akhriyaan Suuratul Faatixa, saddexda midkood oo ku guulaystay inuu ashahaadto faataxadana akhriyo ayaa lasii daayey halka labada kale inta gacmaha laga xiray toogasho lagu dilay.
Taliyaha Booliska Waqooyi Bari Kenya Mohamed Birik, ayaa xaqiijiyey dhacdada lagu dilay labada qof een Soomaalida ahayn, isagoo xusay in xilligan uu socdo hawlgal ay ciidamada ammaanka ee dalkaasi wadaan kaas oo lagu raadgoobayo dableydii weerarkaas geysatay oo loo badinayo in ay dhinaca kaymaha u baxsadeen.
Ma ahan markii ugu horreysey ee Al shabaab fal noocan oo kale ah ka geysato gudaha dalka Kenya, iyaadoo la xusuusto weerar caynkan oo kale ahaa oo sannadkii 2014 Al shabaab ku dishay 28 qof oon Muslimiin ahayn, kuwaas oo la socday gaari bas ah oo marayey meel 50km u jirta magaaada Mandheera, kuna sii jeeday magaalo madaxda dalkaas ee Nairobi.
Al shabaab ayaa toddobaadyadii u dambeeyey kordhisay weerarrada ay ka fulinayso gudaha dalka Kenya gaar ahaan gobollada xuduudka la wadaaga dalka Soomaaliya, siiba degmooyinka Lamu, Gaarisa iyo Wajeer.
Labo nin oo dhallinyaro ahaa oo xalay Boosaaso lagu dilay
Beeralayda Balcad oo ka cabsi qaba in wabiga Shabeelle soo fataho